Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan QuickTime
Sidee ku cadaadisaa Video ah oo la QuickTime Player Pro
QuickTime Rotator: Sida loo Laablaab QuickTime Videos
QuickTime waa ciyaaryahan warbaahinta u PC iyo Mac labada kaas oo sidoo kale loo isticmaali karaa si ay u qoraan ama badalo warbaahinta qaab kasta oo la doonayo. Waxaa u shaqeeya labada desktop-ka. Read More >>
5 Talooyinka subtitles QuickTime
Subtitles yihiin wada hadal kasta video in kiisaska intooda badan waxaa la dhigayaa hoose ee shaashadda. Waxaa loo isticmaali karaa in luqad isku mid. Read More >>
2 siyaabaha ay gubaan movie QuickTime in DVD
Waxad abuuri kartaa nuqul ka mid ah filimada warbaahinta kaydinta gubanaayo videos iyaga on. Software gubashadii Good suurtogelin doonaa DVD aad u socon. Read More >>
Alternative ee QuickTime MPEG-2 qayb loo maqli karo
QuickTime ma taageeri dhan qaabab warbaahinta. Waxaad u baahan tahay in ay plugins kale ama encoders warbaahinta ama gartaan qalabka ay u oggolaadaan in qaar ka mid ah faylasha gaar ah la ciyaari doono. Read More >>
4 kiisaska 'codka lahayn' QuickTime
QuickTime laga yaabaa in aan cod kasta inta lagu jiro loo maqli karo, gaar ahaan haddii video la encoded qaab ah in QuickTime aan ka akhrisan kartaa. Read More >>
2 Talooyinka plugin QuickTime fiican u shaqaynaayo iyo Firefox!
QuickTime plugin waa mid ka mid ah plugins baahan yahay ciyaaro kala duwan oo ka kooban multimedia in bogagga internetka. Created by tufaax sida fudud ah si ay u isticmaalaan ciyaaryahanka. Read More >>
QuickTime waa ciyaaryahan caalami ah warbaahinta in uu wax kasta si qurux badan iyo sidoo kale marka laga reebo abuuro playlists. Waa xoogaa ah bummer ah in ay ogaadaan. Read More >>
Sida loo ciyaaro QuickTime Video on TV Apple
Apple TV ama play hawada waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican ee Apple Inc oo hubi in videos iyo sidoo kale, alaabtii kale waxaa si toos ah u soo ciyaaray ama barta. Read More >>
sababta aan awoodno aan QuickTime video dejinta inay iMovie
Sida software video tafatir ah iMovie waa yaab in loo abuuray by Inc Apple iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa. Read More >>
QuickTime diinta .MOV in MOV? Ma Crazy!
Waa in la ogaadaa in dhammaan qaabab ma waxaa taageera ciyaaryahanka QuickTime iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in. Read More >>
Sida loo noola QuickTime video on Mac?
Waa in la ogaadaa in siii video ah waa wax user kasta oo arrintan la xiriira doonayo in la hubiyo in ugu fiican. Read More >>
Qaybaha QuickTime waa habka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in ciyaaryahanka waxaa loo isticmaalaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Read More >>
Sida loo geliyaan QuickTime videos in YouTube on Mac
YouTube waa mid ka mid ah website-yada ugu caansan dunida oo dhan taas oo ka dhigaysa hubiyo in content ee ma aha oo kaliya share laakiin dadka isticmaala ay sidoo kale si aad u eegto ugu fiican. Read More >>
Aad dhib ku ah in ciyaaro MOV (Quicktime) ee warbaahinta ciyaaryahan sida Windows Media Player, VLC, ama QuickTime? Haddii ay sidaas tahay, macluumaadka hoose gabi ahaanba waa faa'iido kuu. Read More >>
Ma doonaysaa in loogu badalo wmv in QuickTime for loo maqli karo ama waxyaabo kale? Halkan, waxaan ku talinaynaa in aad awood badan ah weli si sahlan loo isticmaalo wmv in QuickTime Converter u samayno shaqo weyn. Read More >>
Maqaalkani waxa uu inta badan kuu sheegayaa sidaad u qabtaan riixo video ah oo la isticmaalayo QuickTime Player Pro, si aad u dhejin kartaa internet-ka ama ku lifaaq Email. Read More >>
Posted by Ahmed Brown | 07.10.2015
Maqaalkani waxa uu kuu sheegi sida loo ciyaaro QuickTime video on iPad / iPhone / Android. Haddii aadan ka ciyaari kara QuickTime video on iPad, iPhone, ama Samsung, halkan ka heli xalka. Read More >>
Halkan waa hage ah oo ku saabsan sida loo shaandheyn QuickTime file video uu soo qaaday ka yeellay ama dhinac si loo saxo oriention aan khasaaro tayo leh. Read More >>
Raadi xal waxay halkan QuickTime video shilalka, ma dhawaaqa ama video lahayn, ama QuickTime fur-tago iyo in xal kale, iwm Read More >>